आफ्नै समय चोर्न पोखरा फर्किएँ
२०७६ कार्तिक १९ मंगलबार १५:१४:००
नेपाली रङ्गमञ्चमा लामो समयदेखि निरन्तर काम गरिरहेका रङ्गकर्मी हुन् अनुप बराल । नाटक पढेर–पढाउँदै आएका उनी कुशल अभिनेता पनि हुन् । नाटक र चलचित्र दुवैमा उत्तिकै शिल्प प्रस्तुत गर्ने अनुपले दर्जनौं नाटक निर्देशन गरेका छन् । अभिनय र निर्देशनलाई सँगसँगै अगाडि बढाएका उनले दर्जनभन्दा बढी चलचित्रमा अभिनय पनि गरेका छन् । उनै अनुप अहिले लामो समय कर्मभूमि काठमाडौं छोडेर जन्मथलो पोखरा फर्किएका छन् । अब उनले ‘वर्किङ स्टेसन’ पोखरालाई बनाएर नाटक र चलचित्रमा काम गर्नेछन् । यसबाहेक अन्य नयाँ काम पनि उनको योजनामा छन् । अनुपसँग उनको पोखरा फिर्ती, अबका योजनासँगै नेपाली रङ्गमञ्च र रङ्गकर्मका विषयमा केन्द्रित रहेर बाह्रखरीका नरेश फुयाँलले गरेको कुराकानीको सारः
अरु अवसरका लागि मोफसल छोडेर काठमाडौं आउँछन्, तपाईं लामो समय बसेको काठमाडौं छोडेर पोखरा फर्किनुभयो । अनुप बराल अब काठमाडौं फर्किंदैन भन्ने हल्ला छ नि ?
त्यस्तो होइन । काठमाडौं र पोखरा भौगोलिक दूरीका हिसाबले पनि त्यति धेरै टाढा छैन । मलाई पोखरा बस्दा पनि काठमाडौंमै छु जस्तो लाग्छ । सर्जकले गर्ने काम हो, काम जहाँ बसेर गर्दा पनि केही फरक पर्दैन । सामाजिक सञ्जालका कारण पनि भौगोलिक दूरीले खासै असर गर्छ जस्तो लाग्दैन । काम गर्ने माहोललाई अझै बृहद् बनाउन म पोखरा आएको हुँ । काठमाडौंमा बसेर जे गरेँ, काठमाडौंबाहिर बसेर त्यही काम गरेँ भने त्यो ठाउँका लागि केही सहयोग पनि हुन्छ ।
काठमाडौं बसेर काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ नि ?
पोखराबाट मैले मेरो रङ्गकर्म सुरु गरेँ । सिर्जना कर्म पनि पोखराबाटै सुरु गरेँ । केही कारणले काठमाडौं बस्नुपर्ने अवस्था थियो । अब त्यो नरहेपछि फर्किएँ । जुम्लामै बसेर पनि काम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई । मैले काठमाडौं बसेर काम गरे पनि देखाउने ठाउँ काठमाडौं, जनकपुर, विराटनगर हुन सक्छ । बढ्दो विकास र प्रविधिका कारण त्यसो गर्न सहज छ ।
काठमाडौंमा बसेर काम गनुपर्छ भन्ने मान्यता भइरहेका बेला मेरो बुवा (वात्सायन) पोखरामै बसेर काम गरिरहनुभएको छ । सरुभक्त पोखरामै हुनुहुन्छ । प्रकाश घिमिरे, माओत्से गुरुङ पोखरामै बसेर नाटक र चलचित्र दुवैमा काम गरिरहनुभएको छ ।
तपाईंको आफ्नै एक्टर स्टुडियो छ । त्यहाँ पढाउनु हुन्छ । चलचित्रमा अभिनय पनि गरिरहनुभएकै छ । बेलाबेलामा नाटक निर्देशन पनि गरिरहनु हुन्छ । काठमाडौंमा बसेर काम गर्न जति सहज छ, पोखरामा बसेर त्यति नै गर्न सकिएला ?
झन् धेरै समय आफू र आफ्ना लागि दिन पाउँछु भन्ने विश्वास लिएको छु । काठमाडौंमा झन् धेरै विभाजित भएँ । रङ्गकर्म मात्रै भएन । राम्रो स्क्रिप्ट आयो भने चलचित्र पनि गर्न मन लाग्छ । सार्वजनिक कार्यक्रममा साथीभाइहरुले बोलाउँछन्, जानैपर्यो । आफूलाई समय दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो ।
नयाँ केही योजना पनि छन् । धेरै पहिलादेखि मैले रङ्गमञ्चसम्बन्धी किताब लेख्ने प्रयास गरिरहेको थिएँ । रङ्गमञ्चका अलगअलग पाटालाई समेटेर पुस्तक लेख्ने मेरो इच्छा हो । त्यो त्यतिकै थाँती नै रहेको थियो । ‘मेमोयर’ पनि लेख्न मन छ । सायद मैले आफ्नै समय चोर्न पनि खोजेको हुँला ।
यसको मतलब चलचित्र र नाटकमा यहाँलाई जति देखिन्थ्यो, त्यो अब पातलिने हो ?
हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन । खगेन्द्र लामिछानेको ‘पानी फोटो’को ४० दिनको सुटिङ सकेर भर्खरै फर्किएको छु । आराम पनि चाहिन्छ । अभिनेताले धेरै काम गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन । एउटा भूमिकाबाट अर्को भूमिकामा स्विच हुन केही समय लाग्छ । बस्ने मात्रै पोखरा हो । काम गर्न त म जहाँ पनि जान्छु । बस्ने स्टेसन मात्रै पोखरा हो ।
अनुप बराल आफैंमा अग्रज रङ्गकर्मी, तपाईंले पढाएका सयौं विद्यार्थी अहिले नाटक र चलचित्रमा छन् । तपाईंले सुरु गर्दा र अहिलेको नाटकको अवस्थामा फरक के छ ?
धेरै नै फरक छ । मैले रङ्गकर्म सुरु गर्दा ‘नेपाली रङ्गमञ्च मर्यो’, (नाउ नेपाली थिएटर इज डेड) भन्ने गरिन्थ्यो । रङ्गकर्ममै रहेकाहरु पनि ग्ल्यामरका अरु क्षेत्रतर्फ लागेका थिए । टेलिभिजनतर्फ लागेका थिए । रङ्गमञ्च भनेको मरुभूमिको पट्यारलाग्दो ठाउँको यात्राजस्तो थियो । रेल चढेर एउटा प्लेटफर्ममा ओर्लिएपछि एकछिन हलचल हुन्छ । त्यसपछि लामो सुनसान हुन्छ, त्यस्तै थियो मैले सुरु गर्दा नेपाली रङ्गमञ्चको अवस्था ।
अहिले काठमाडौंलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ रङ्गकर्ममा ठूलो परिवर्तन आएको छ । सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन त अलगअलग नाटक घर स्थापना गरिए, त्यो पनि राज्यको सहयोगविना । मलाई लाग्छ, साउथ एसियामा रङ्गकर्ममा आएको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन हो यो । अरु देशमा पनि थिएटर होलान्, छन् । रङ्गकर्म पनि होला, छ । तर व्यक्तिगत तवरमा निकै कम छन् । सरकारी सहयोगमा स्थापना भएका थिएटर छन् ।
राम्रो नाटक बनेको अवस्थामा अहिले नाटक हेर्नेको भीड जहाँ पनि लाग्छ । हाम्रो समयमा मध्यमवर्गीय परिवारका दर्शक नाटक हेर्न आउँथे । अहिले नयाँ दर्शकको आकर्षण छ । विश्व–विद्यालय, विद्यालयका विद्यार्थी पनि दर्शक भएका छन् ।
एउटा नाटक रिहर्सल गरेपछि महिनौंसम्म मञ्चन गर्न सक्ने अवस्था नै थिएन । कि त प्रयोगवादी नाटक भइरहेका थिए, त्यस्ता नाटक दर्शकले कुन छेउ कुन टुप्पो पत्तो लगाउन सक्दैनथे । कि अश्लील संवाद प्रयोग गरेर हल्काफुल्का नाटक तयार हुन्थे । जुन अहिले छैन । नेपाली नाटक अहिले अन्तरराष्ट्रिय फेस्टिभलहरुमा जान थालेका छन्, जुन सुखद सङ्केत हो ।
तर समस्या के हो भने मैले नाटक सुरु गर्दा पनि नाटक र नाटकका गतिविधि काठमाडौंमै केन्द्रित थियो । अहिले पनि काठमाडौंमै केन्द्रित छ । यसमा परिवर्तन आएको छैन । भलै, पोखरा र विराटनगरमा नाटक घर खुलेका छन् । झापामा पनि साथीहरुले खोल्दैछन् । आशा गरौं, यो क्रम बाक्लिने छ ।
महिला रङ्गकर्मीको उपस्थिति (निर्देशन, अभिनय र रङ्गमञ्चका अन्य प्रभाग)मा दह्रो रुपमा हुनु पनि पहिले र अहिलेको रङ्गमचमा देखिएको ठूलो परिवर्तन हो ।
रङ्गकर्मले दशकौं गुजारे पनि उति साह्रो फड्को मार्न सकेको छैन । बरु पछिल्ला केही वर्षयता नाटकको गुणस्तर झनै खस्कियो भनेर स्वयम् रङ्गकर्मीहरु नै भनिरहनुभएको छ । यो त झन् उल्टो भएन र ?
धेरै नाटक दोहोरिएको हो । एकै प्रकारका नाटकको पुनरावृत्ति भएकै हो । यसबाटै सिक्दै अगाडि बढ्ने हो । हामीले एउटै कुरा दोहोर्याइरहेका रहेछौं भन्ने थाहा भएपछि मान्छेले त्यसबीचबाटै नयाँ काम सुरु गर्ने हो । मुख्य कुरा रङ्गमञ्चका गतिविधि बढ्नुपर्यो । गतिविधि बढ्दै गएपछि राम्रो–नराम्रो छुट्टिँदै जान्छ । र, मान्छेले राम्रो कुरालाई अगाडि लिएर जान्छ ।
काठमाडौंमा नाटक घर थुप्रै खुले । थुप्रै रङ्गकर्मी सक्रिय छन् । तर पनि नाटक घर, त्यसभित्रका सिटको अवस्था उस्तै छ । आज पनि हाम्रा नाटक घर साह्रै दयनीय देखिन्छन्, किन ?
सही कुरा हो । सुविधा सम्पन्न रङ्गमञ्चको खाँचो छ । नाटक हुनलाई स्क्रिप्ट, खेल्ने पात्र र स्थान भए पुग्छ । पहिलापहिला ग्रिसमा नाटक हुँदा मञ्च नै हुँदैनथ्यो । डाँडा काटेर मञ्च खडा गरिन्थ्यो । हामीले त्यो अवस्था ‘स्किप’ गर्यौं । तर त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा अहिलेको अवस्थामा आधारभूत संरचना हुनैपर्छ । ट्वाइलेट सफा होस्, गर्मीमा शीतल भैदियोस् । यी कुराहरु नेपाली थिएटरहरुले सुधार गर्नैपर्छ ।
नाटकलाई चलचित्र झैं किन व्यावसायीकरण गर्न सकिएन ? चलचित्रमा कलाकारले कसेर पारिश्रमिक लिइरहँदा नाटकका कलाकारले त्यो अपेक्षा गर्ने अवस्था छैन । कथंकदाचित आइगयो भने दामाशाही तरिकाले बाडौंला भनिन्छ । यस्तो अवस्था किन ?
दुई–तीन कारण छन् । पहिलो कुरा, हामीले नाटकलाई चलचित्र झैं किन व्यावसायिक बनाउन सकेनौं । नेपालमा मात्रै होइन विदेशमा पनि अवस्था त्यस्तै हो । राम्राराम्रा रङ्गकर्मीले भारतमा पनि पैसा त परकै कुरा, राम्रो थिएटर पनि पाउँदैनन् । रहर पूरा गर्ने ठाउँ पनि पाएका छैनन् । तर नेपालमा हामीले त्यस्तो अवस्था बेहोर्नुपरेको छैन ।
अर्को कुरा, थिएटर हल सानासाना छन् । डेढ सय जनाभन्दा बढी अट्नेखालका छैनन् । टिकट दर पनि महङ्गो नहुने गरी राख्नुपर्यो । त्यो टिकटबाट उठेको पैसाले राम्रो नाटक गर्नका लागि सेट, लाइट, इफेक्ट्स, साउन्ड, म्युजिक परिकल्पना गर्नुपर्यो । प्रोडक्सन खर्चिलो हुन्छ । टिकटबाट पैसा कम आउँछ । कलाकारलाई दिन पैसा नै बाँकी रहँदैन ।
मेरो विचारमा नाटक समाजको कल्चरको सबैभन्दा महत्वपूर्ण हतियार हो । यसले समाज निर्माण तथा दीर्घकालीन रुपमा सचेत नागरिक बनाउन, जीवनको सौन्दर्य खोज्ने चेतना जागृत गर्ने ठाउँ हो नाटक । यो महसुस गर्ने मान्छे रङ्गकर्ममा कम आउँछन् । आए पनि आउँछन्, केही समय बस्छन् र अर्कोतर्फ हिँड्छन् ।
समाजमा रहेका उद्योगी–व्यापारीमा नाटकले राज्यमा सचेत नागरिक निर्माणमा सहयोग गर्छ भन्ने बुझाइ नभइदिनाले स्पोन्सर पाउन मुस्किल परेको छ । उद्योग तथा व्यवसायबाट स्पोन्सर भएका खण्डमा कलाकारलाई बाँड्न सक्ने पैसा आउँथ्यो होला ।
समाजले नाटकको महत्व र योगदानलाई बुझ्न सकेन कि सरोकारवालले बुझाउने पहल नै गरेनन् ?
यसमा दुवैको कमजोरी होला । हामीले जुन पहल गर्नुपथ्र्यो, त्यो गर्न पनि सकेनौैं भन्ने लाग्छ । व्यावसायिक रुपमा अगाडि लैजान नसकेकै हो ।
रङ्गमञ्च क्षणिक कला हो । नाटक लेख्यो, एक महिना रिहर्सल गर्यो । अर्को एक महिना देखायो, त्यसपछि सकियो । अर्थात् यो क्षणिक कला हो । अरुमा एकपटक लगानी गरेपछि त्यसबाट आम्दानी भइरहन्छ । तर नाटकमा त्यो अवस्था हुँदैन । राम्रो नाटक बनाउने अनुभवी निर्देशकका लागि त केही अवसर पनि होला नाटकमै । तर नयाँ निर्देशकलाई कसले पत्याउने ? कहाँ काम देखाउने ? समस्या छ । राम्रो काम गर्नेलाई राज्यको संरक्षण आवश्यक छ । राज्यको संरक्षण र सहयोगविना रङ्गमञ्चले दिगो स्वरुप ग्रहण गर्न सक्दैन ।
रङ्गकर्म चलचित्रसम्म पुग्ने भर्याङ बनिरहेको यहाँ पनि स्वीकार्नु नै हुन्छ होला । तपाईं स्वयम् पनि केही ब्यानरका चलचित्रमा काम गरिरहनुभएकै छ । नाटकमै सन्तुष्टि छ भन्दाभन्दै रङ्गकर्मीहरु किन चलचित्रमा जान्छन् ?
यो कुरामा मेरो सहमति छैन । नाटक र चलचित्र एकअर्काका परिपूरक हुन्, तर हामीले यसलाई फरकफरक भनेर बुझिरहेका छौं । र, नाटकमा काम गर्नेले चलचित्रमा र चलचित्रमा काम गर्नेले नाटकमा काम गर्नु हुँदैन भन्ने गलत मान्यता छ । कलाकार भइसकेपछि उसले कहाँबाट–कसरी आफ्नो कला र आइडियालाई धेरैभन्दा धेरै दर्शकमाझ लैजान सकिन्छ भन्ने कुरामा ऊ स्वतन्त्र हुन्छ । कति कुराहरुमा चलचित्रले रङ्गकर्मलाई आइडिया दिएको छ । रङ्गकर्मबाट चलचित्रमा गएका कलाकारबाट कयौं चलचित्रले नयाँ स्वरुप पाएका छन् । नयाँ सोच र अभिनयको तौरतरिका पाएका छन् । राम्रो चलचित्र गरेर नाम कमाएपछि थिएटरमा काम गर्दा चलचित्रका दर्शक पनि थिएटरमा आउन सक्छन् । यो प्रक्रिया चलिरहनुपर्छ । थिएटरलाई चटक्कै छोडेर चलचित्रमा मात्रै काम गर्यो भने त्योचाहिँ समस्या हो । तर दुवैलाई सँगै लिएर अगाडि बढ्यो भने केही समस्या हुँदैन ।
सिँढी बनाउने कुरामा हलिउड र बलिउडमा हेर्ने हो भने त्यहाँका भेट्रान एक्टर–एक्ट्रेस थिएटरबाटै गएका छन् । त्यहाँ कसैले किन तिमीहरु चलचित्रमा आयौ ? किन थिएटरमा फर्किएनौ भनेर सोधेको पाइँदैन । अलि धेरै दर्शकमाझ पुग्नुपर्छ भन्ने मोह होला । यसमा खुल्ला हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
चलचित्रमा जस्तै नाटकमा पनि काम गरेर जीवन निर्वाह हुने गरी पारिश्रमिक पाउने र सिनेमा घरमा जस्तै नाटक घरमा दर्शकको लर्को लाग्ने दिनको कल्पना गर्न सकिएला ?
भैरहेको छ । राम्रो नाटक गर्दा दर्शक आउनुभएको छ । मैले ‘कोर्ट मार्सल’ गर्दा बनेपाबाट गाडी रिजर्भ गरेर दर्शक आउनुहुन्थ्यो । टिकट नपाउँदा भनसुन गराउनुहन्थ्यो । भएन भने हामीलाई जसरी पनि टिकट चाहियो भनेर झगडै गर्न आएको हामीले देखेकै हौं । नाटकको गुणस्तरले नै दर्शकलाई तान्न सक्नुपर्छ । नाटक राम्रा हुन्छन् भन्ने भावना दर्शकमा सिर्जना गर्नुपर्छ ।
तर समस्या थिएटर हलको क्षमता नै कम छ । एकै पटक १० वटा हलमा लगेर प्रिन्ट देखाउन मिल्दैन । दुईवटा भन्दा धेरै सो दिनमा देखाउन सकिँदैन । पैसा जेनेरेट हुने सोबाट नै हो । नाट्य स्वरुप नै क्षणिक हुन्छ । लाइभ एक्टको विशेषता नै यही हो । नाटकको दर्शक र कलाकारबीचको सम्बन्धका फाइदा र बेफाइदा दुवै छन् ।
अग्रज रङ्गकर्मीलाई पछिल्लो पुस्ताले सधैं लगाउने गरेको आरोप छ, नेपाली रङ्गकर्मलाई माथि उठाउन अग्रजहरुले पहल नै गरेनन्, जसको मार हामी भोगिरहेका छौं । सत्य हो ?
रङ्गकर्म गर्न नै गाह्रो थियो । भोकभोकै काम गर्न सकिँदैन । भोको पेटमा नाटक पनि कुरुप देखिन्छ भनिन्छ । वातावरण नै थिएन । वातावरण नबन्नुको कारण एउटा वा दुइटा व्यक्तिले पहल गरेर मात्रै हुँदैन । राज्यको सांस्कृतिक उदासीनताको कारण अथवा राज्यको सांस्कृतिक विभाग हेर्नेहरुमा कल्चरल स्वरुप नै विकास हुन सकेनन् । यसको सीधा असर रङ्गकर्ममा पर्यो । राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने, नयाँ कुरामा प्रेरित गर्ने काम राज्यले गर्नुपर्छ । नाटक मञ्चन गर्ने मात्रै काम भयो । नाटक स्कुल खोल्ने काम भएन । अग्रजहरुले जति गर्नुभयो त्यति पनि नगर्नुभएको भए अहिले हामी जुन धरातलमा बसेर काम गरिरहेका छौं, यो पनि सम्भव थिएन ।